JD Sports 4.6.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.6.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း JD Sports
JD Sports ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အသစ်နှင့်သီးသန့်ထုတ်ကုန်နေ့စဉ်ရောက်ရှိလာနှင့်တကွ, JD App ကိုသင် looped စောင့်ရှောက်။ တစ်ဦးက Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်ထိပ်ပိုင်းရေပန်းစားဖက်ရှင်များအတွက်ပူပွဲချင်းပြီးတကိုရပ်တန့်။ နောက်ဆုံးပေါ် VaporMax, Air ကိုမက်စ် 90, Air ကိုမက်စ် 95 နှင့် Air မက် Nike ကကနေ 97 သင်တန်းဆရာအဖြစ် adidas မူရင်းရှိုးပွဲ NMD, Yeezy, Ultra Boost, Stan Smith က Superstar စားသောက်ဆိုင်သင်တန်းဆရာနှင့်အများအပြားပိုပြီးစျေးဝယ်။ သင်, ရာသီသစ်စတိုင်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့လတ်ဆတ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်, Nike ကထံမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, adidas မူရင်းရှိုးပွဲများ, adidas စွမ်းဆောင်ရည်, မြောက်မျက်နှာ, ဝါးတားပိုလို Ralph Lauren, SikSilk, EA7, ချန်ပီယံ, SikSilk, Fila, စကားပြောဆိုမှုနှင့်ဝန်ပိုပြီးလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် ။
အရောင်းပေါ်ပထမဦးဆုံးစကားလုံး, အမဲရောင်သောကြာနေ့, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ဖြစ်ရပ်များ Get နှင့်သင်အခြားမည်သူမဆိုရှေ့တော်၌ထိုအိတ်၌သင်တို့၏ကြီးမားသောအမှတ်တံဆိပ်အပေးအယူ, အထူးလျှော့စျေးနှင့်ငွေစုရသေချာအောင်!
ကျနော်တို့သင်စေး, တရားရုံး, ဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းနှိပ်ပါတယ်ရှိမရှိသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးလောင်စာစွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းပိုင်း၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့်အတူလည်းဖုံးလွှမ်းကြံ့ခိုင်ရေးလိုအပ်ချက်, ရရှိပါသည်။
Gals, သင်တို့အဘို့ဒီတစ်ခုရဲ့။ ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီး newness စျေးဝယ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်? adidas, Nike က, Ellesse, Puma Fenty, Fila, ချန်ပီယံ, ဗင်, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, ပန်းရောင်ဆော်ဒါနှင့်ပိုပြီးထံမှသင်တန်းဆရာ, အဝတ်အစားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ အကြှနျုပျတို့သညျ .. JD ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်သီးသန့်အဘို့အ JD အမျိုးသမီးများအပေါ် Get တယ်။
အရာပေါ်ထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့ - Search ကိုသင်တို့အဘို့အရှာနေတာနှင့်တိုက်ရိုက်အမျိုးအစားရှိပြီးတော့ယိဆက်စပ်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်များစာရင်းကိုနှင့်အတူဆင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
လျင်မြန်စွာသန့်စင်ပြီးထိပ်ပိုင်းကသင်၏စတိုင်ညီဆုံးနေ့စွဲအတိအကျကိုပွဲကိုရှာရှာ! ကသင်တန်းဆရာ, ဘောလုံးဖိနပ်သို့မဟုတ်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ရှိမရှိ, ချ Filter များနှင့်အရွယ်အစား, အရောင်, စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအားဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်သင်၏နောက်ဝယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆင်းရ။ သင်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အသံကိုသုံးနိုငျပါသညျ!
360 သင်တန်းပေးသူလှည့်ဖျားနှင့်ထုတ်လုပ်မှု VIDEOS
အနီးကပ်သင်၏နောက် pair တစုံမှတက် Get - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 360 သင်တန်းဆရာအမြင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ထောင့်ကနေ JD ရဲ့သင်တန်းဆရာအကွာအဝေးမှာကြည့်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ Plus အားကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ဘောဖြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hi-def ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူသေတ္တာထဲကတူအဘယ်အရာကိုကြည့်ပါ။
PRODUCT သည် Personal
app ထဲမှာအားလုံးရရှိနိုင်ပါကသင်၏ဦးထုပ်, အိတ်, ဘောလုံးဘွတ်ဖိနပ်နဲ့ဘောလုံးအင်္ကျီတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ထည့်ပါ။
တစ်ချက်ချင်းအတွက်စတိုင် Organize ။ အဆိုပါကစားသမားနှင့်သင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ရွေး-ups Share သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုမွေးနေ့များအတွက်အချို့အတွေးအခေါ်များပေး, Black ကသောကြာနေ့နှင့်ခရစ္စမတ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာထွက်များစစ်ဆေး! Klarna နှင့် Masterpass အတူ - သင်ကိုက်ညီကြောင်းငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ရယူခြင်း, ရိုးရိုး Klarna သုံးပြီးထွက်စစ်ဆေးနှင့်နောက်လပေးဆောင်, အကျိုးစီးပွား-အခမဲ့ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! သို့မဟုတ် Masterpass နှင့်အတူစျေးဝယ်; လုံခြုံပြီးလုံခြုံရာအရပျ၌သင်တို့၏ငွေပေးချေမှုနှင့်ဖြန့်ဝေအချက်အလက်ကိုသိုလှောင်ထားတဲ့အွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ် - အွန်လိုင်းစျေးဝယ်၏လုပ်ရတဲ့ထွက်ဖြတ်တောက်။
အကြှနျုပျတို့သညျ 500 ကျော်စတိုးဆိုင်ကနေစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ် (express ကိုရှေးခယျြစရာအပါအဝင်) 197 ကျော်နိုင်ငံများသို့ကယ်နှုတ်တော်မူ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း & Shop
သင့်ရဲ့သင်တန်းဆရာအရွယ်အစား store မှာရှာမရနိုင်မလား? ထုတ်ကုန်ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ app ကိုအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ဆိုင်ပစ္စည်းများထွက်စစ်ဆေးပါ။
Instant သတင်းနှင့်အရောင်း UPDATE
အရောင်းနှင့်သီးသန့်ဖြန့်ဝေကမ်းလှမ်းမှုအကြောင်းကိုသိရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အသိပေးချက်များအပေါ် Turn နှင့်ဖြောင့်ကိုအကြှနျုပျတို့မှ updates များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဒေသခံ JD FIND
ကျနော်တို့အမှုအရာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင် Finder မွမ်းမံပါတယ်။ အပြန်အလှန်မြေပုံနှင့်သင်၏အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်ကိုဆင်းခြေရာခံသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ A-Z ကိုစာရင်းမှတဆင့် scroll ။
Fancy ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာမှချွတ်ဖေါ်ပြခြင်း? ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးမြို့ရိုးအထွက်စစ်ဆေးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူယနေ့အထိတက်နေဖို့သို့မဟုတ်လေးစားပါတယ်မှအလုံးစုံတို့အဘို့ pics တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွင်လတ်ဆတ် flaunt ။
MY ACCOUNT ကိုထုတ်ခဲ့
ပြောင်းလဲမှု &, လိပ်စာများကို add ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ကို update, သင့်အမိန့်ကိုခြေရာခံ, ယခင်အမိန့်ရှုမြင်အပေါင်းတို့နှင့်တဦးပွဲချင်းပြီးထံမှ / ရှယ်ယာအများအပြားကိုလိုချင်သောစာရင်းဖန်တီးပါ။
JD X ကိုရေဒီယို
အလတ်ဆတ်ဂီတ 24/7 နားထောင်ကြလော့။ သငျသညျစျေးဝယ်အဖြစ်အကြီးမားဆုံးအနုပညာရှင်နှင့် DJs အဖြစ်ရီလင်းသတင်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြသစာရင်းများမှနောက်ဆုံးပေါ်တီးလုံးများအတွက် JD X ကိုရေဒီယိုပေါ်သို့ပြောင်းပါ။ နှင့်ဖမ်းထအတူသငျသညျအထဲကလက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
JD X ကို Unlimited Delivery
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်စက်စက်ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူန့်အသတ် newness ခံစားရသည်။ ရုံ£ 9.99 များအတွက်, ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်န့်အသတ်ဗြိတိန်နောက်နေ့ပေးပို့ဖမ်းပြီး။
JD Sports အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
JD Sports အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
JD Sports အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
JD Sports အား အခ်က္ျပပါ
legende4ever စတိုး54.64k
JD Sports ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း JD Sports အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.6.3
ထုတ်လုပ်သူ JD Sports Fashion PLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://m.jdsports.co.uk/customer-service/privacy/
လက်မှတ် SHA1: 47:71:F1:06:F4:03:D8:3D:23:7D:FC:7B:84:49:FC:FE:0A:8B:A0:72
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Paul Maxwell
အဖွဲ့အစည်း (O): JD PLC
JD Sports APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ